जेपी गुप्ताले किन प्रधानमंत्री र गृहमंत्रीका विरूद्ध अदालतको मानहानी मुदा दायर गरें ?
मधेशी युवाहरु हातहतियार तथा खरखजाना ऐनको दुरुपयोगवाट पिडित छन । आफू सरकार तथा संसदमा हुँदा यो विषय निरन्तर उठाइ रहेको थिएँ । कारगारमा आइसकेपछि यस विषयलाई उठान गर्ने अन्य माध्यम नरहेकोले अदालतको अवहेलना मार्फत सरकारलाई यस कानुनको पुनरावलोकनको लागि मानहानीको मुदाको माध्यमले निवेदन दिएको हुं ।
संविधानसभाको आकार र निर्वाचन क्षेत्र पेचिला सवाल
जेठमा निर्वाचन गरिनु पर्नेमा सत्ता पक्षमा सहमति छ । 'जसरी भएपनि' जेठमा निर्वाचन गराउन सरकारी पक्षमा अहिले यान्त्रिक सोच हावी भएको छ ।
मुलुकमा परिवर्तनकारी शक्तिहरू कमजोर भएका छन् । एकात्मवादी 'स्थायी सत्ता' लाई रूपान्तरित गर्ने दोस्रो जनआन्दोलन र दुबै मधेस विद्रोहको कार्यभार अनुसार अगाडी बढ्ने समुदाय र पक्षहरू मथ्थर भएका छन् ।
वितेको छ दशक देखिको राजनीतिक मांगपछि मुलुकले संविधानसभा पाएको थियो । संविधानसभालाई मधेसीको पक्षमा फलदायी बनाउन ५० जना भन्दा बढी मधेसी युवाहरू शहीद भए । यस संविधानसभाको अवसान हुनु अगावै मधेसका प्रायसः सबै मुद्दाहरू-पहिचानको मान्यता, स्वायत्त मधेस प्रदेश, भाषिक अधिकार, विधायिकामा न्यायपुर्ण् प्रतिनिधित्व र सर्वपक्षीय समावेशीकरण आदि सबै मुद्दाहरू अमान्य भैसकेको थियो । सत्य र तथ्य यही नै हो । (अन्नपूर्ण पोष्ट, मंसीर २५, २०६९ मा प्रकाशित)
जेपीको आफ्नै संवादः राज्यले मलाइ शूलीमा झुण्डयायो
मेरो श्रद्धा भनेकै मेरो प्रतिवद्धता हो । यो प्रतिवद्धता भनेकै फेरी मेरो निजी विश्वास हो, जो सदृश्य हुदै हुदैन । बाहिरबाट अरुले देख्दैनन् । कर्म प्रतिको चेतनाले, फलानो काम जसरी भएपनि गरिछोड्छु- यो त आन्तरिक रूपमा न मानिसलाई उत्प्रेरित गर्दछ । यस्को वाहिरी र देखावटी रूप के नै हुन्छ र ? (नयां पत्रिका, मंसीर ३०, २०६९ मा प्रकाशित)
'A new force will emerge in Madhes'-JP Gupta
के अहिले मधेसी मोर्चा जे गर्दै छ, यो ठिक हो ? ल खुला छलफलमा भाग लिउं
संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा आफ्नो गठनका बखत केही निश्चित ध्येय, धारणा र कार्यदिशाका सम्बन्धमा स्पष्ट थियो । तर, अहिले यो गंभीर प्रकारको अस्पष्टता, दिशाहिनता र विचलनको बाटोमा हिड्दैछ । माओवादीसंग सत्तासमिकरण बनाउंदा एमाले र कांग्रेसबाट मोर्चाले राष्ट्रघातीको आरोप झेल्नुपरेको थियो ।
जेलबाट देखिएको माओवादी-मोर्चा गठबन्धन
संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा अहिले माओवादीको नेतृत्वमा गठित संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक मोर्चामा समाहित भएको छ । मधेसी मोर्चालाई कब्जा गरेका यसका मंत्रीहरूको यस निर्णयलाई मधेसी जनताको तहबाट अनि मुलुकले बडो आश्चर्यका साथ हेरेको छ । यस सन्दर्भमा खासगरी तीनवटा कुराले सबैलाई बढी जिल्याएको हुनुपर्दछ ।
राज्यसत्ताको खिलाफमा अब विद्रोहले वैधानिकता पाउंछ कि पाउंदैन ?
मुलुकलाई लामो द्वन्दबाट मुक्तिदिने भनिएका नेताहरूले मुलुकलाई पुनः गहिरो संकटमा धकेल्नु भएको छ । विभिन्न भाग र भेगका जनताको भावनामा प्रदेशहरूको जन्म भैसकेको छ ।
श्रीलंका पुग्नु अघि.......
उहिले सिलोन भनिने, आजको श्रीलंकाको इतिहास बडो रोचक छ । हरेक प्राचीन मुलुकहरुका झै यहांका इतिहासमा पनि देवी देवताका मिथकहरु, राजा महाराजाका गाथाहरु, धर्म र अधर्मका बीचका संर्घषहरु, सत्ता तथा शक्ति हत्याउने दरवारका दांउपेचहरु, राज्यविस्तारका योजनाहरु तथा विदेशी अतिक्रमणका घटना एवं त्यसका प्रतिरोधका कुराहरु प्रसस्त भेटिन्छन् ।